Qoys ka codsanaya madaxda Somaliland jawaabo - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Qoys ka codsanaya madaxda Somaliland jawaabo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 Janaayo, 2013, 18:57 GMT 21:57 SGA
Qoyska nin ku dhintay saldhiga booliiska ee Burco ayaa ka dalbanaya masuuliyiinta Somaliland ay jawaab ka siiyaan sababtii uu ugu dhintay xabsiga. Cabdullaahi Maxamed Ibraahim, oo 43 jir ahaa waxa uu muddo dheer degenaa London.
Cabdullahi Maxamed Ibrahim waxa uu dhintay isaga oo ku jira saldhigga booliiska Burco.
Qoyska nin ku dhintay saldhiga booliiska ee magaalada Burco ayaa ka dalbanaya masuuliyiinta Somaliland ay jawaab ka siiyaan sababtii uu ugu dhintay xabsiga.
Cabdullaahi Maxamed Ibraahim, oo 43 jir ahaa waxa uu muddo dheer degenaa London, wuxuuna dib ugu noqday dalkii. Dhawaan ayaa isagoo baabuur wata waxaa la sheegay inuu jiiray oo uu dilay nin ka tirsan booliiska magaalada Burco.
Cabdullaahi Mohamed Ibraahim meydkiisii waxaa laga helay qolkii uu ku xirnaa, saacado ka hor intii aan maxkamd la hor geyn.
Qoyska Cabdullaahi Maxamed Ibraahim waxa ay sheegayaan inuu u dhintay dhaawacyo jirdil lagu sameeyay.
Masuuliyiinta Somaliland oo BBC ay la xiriirtay waa ay ka gaabsadeen inay war ka bixiyaan arrintiisa, laakiin waxay sheegeen in baaritaan uu socdo.
Haddaba waxaa Istuudiyaha BBC noogu timid Khadra Cabdullaahi Maxamed oo uu dhalay marxuumka.
Farxaan Maxamed Jimcaale oo wareystay ayaa weydiiyay sida ay ku oggaadeen sidii uu u dhintay aabeheed?